Ime ụlọ ịwụ Factlọ ọrụ |lọ ọrụ | China Ime ụlọ ịwụ Manufacturers na Suppliers
Tụgharịa elu Waste maka ime ụlọ ịwụ
Nkọwapụta numberdị Nlereanya CP-F73 Isi Ihe 304 igwe anaghị agba nchara Ichachacha ngwugwu Akpa ụfụfụ na katọn nke a na-ahazi eriri mmiri a, nke nwere ike ịtụgharị na uche ya, ọrụ dị mma, dị mfe imeghe ma mechie. Jiri ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ, mfe iji hichaa ma dochie ya. dabere na mfe tụgharịa Top mgba ọkụ imewe ọrụ, igbapu nwere ike ire ụtọ drainage n'otu ntabi anya, zuru okè n'ihi na ụlọ ịwụ. Nke a igwe anaghị agba nchara tụgharịa n'elu bezin n'efu na ọkọlọtọ eri ...
mechie valvụ mmiri nke igwe anaghị agba nchara
Nkọwapụta numberdị nọmba CP-F36 Isi Ihe 304 igwe anaghị agba nchara Ọrụ Single Finish Brushed Packing Foam bag na katọn Nke a nri akuku mmiri na-enye mmiri bụ njikọ zuru ụwa ọnụ, njikọta ogologo eriri njikọ, washer gụnyere. Valve bụ ngwa dị mkpa maka kichin na ime ụlọ ịwụ. Nke a na-akwụsị valvụ nke siri ike igwe anaghị agba nchara na seramiiki valvụ isi, na-egbu maramara chrome imecha, àgwà ihe onwunwe na nkà ịrụ maka anwụ ngwa ngwa, re ...
Mmapụta Wates maka bath bath
Nkọwapụta numberdị nọmba CP-F78 Isi ihe 304 igwe anaghị agba nchara Emechara nchacha Mbukota akpa ụfụfụ na katọn Ihe nkwụnye mmiri a dị mfe ịkwụsị maka mkpofu mmiri. na-eji ire ụtọ push-button ọrụ, ike mgbali eguzogide. Na mmiri uko akara, mfe imeghe na close.With ngwa ngwa mmiri nnyefe ọsọ, mfe ọcha na-anọchi. Igwe anaghị agba nchara anaghị agba nchara: isi mmiri na-agbanye bọtịnụ anaghị achọ mkpanaka ebuli. Nwere ike ịgbanye akwa okpu ...
Nkọwapụta numberdị nọmba CP-F11 Isi Ihe 304 igwe anaghị agba nchara Ichachacha ngwugwu ụfụfụfụfụ na ngwa ngwa Ngwa ụlọ ịsa ahụ Bathroom ma ọ bụ sink Nke a na-ehichapu mmiri na-agbasawanye ma na-agbasawanye, na-agbanwe maka ụdị dị iche iche. gaa na “U”, “S” ma ọ bụ ụdị ndị ọzọ, nwere ogologo gbasaa elu. Ọ na-mere nke adịchaghị oké na ike ABS na ígwè ...
Triangle nkuku shelf nke igwe anaghị ata nchara
Nkọwapụta numberdị nọmba CP-F15 Isi Ihe 304 igwe anaghị agba nchara Emechara Nchapu Mbukota akpa ụfụfụ na ngwa ngwa Ngwa ụlọ ịwụ ahụ Mgbidi a na-etinye ebe a na-echekwa ebe a nwere ike siri ike, na-adịgide adịgide ma sie ike nchara 304, nwere ezigbo mbibi nke corrosion, na-eme ka ọ dịgide na ogologo ndụ. zuru oke iji gbasaa ohere, shelf ndị a iji gbanwee nkuku ahụ gaa na nchekwa dị mma na nke bara uru na oghere ngosi.Ọ dị mma maka decorat ...
Ibughari elu igwe anaghị agba nchara akwa akwa
Nkọwapụta numberdị nọmba CP-F46 Isi ihe 304 igwe anaghị agba nchara Emechara nchacha mbukota akpa ụfụfụ na katoonu Ngwa athlọ ịwụ ahụ Mgbidi Mgbidi bathroomlọ ịsa ahụ na-agbanwe agbanwe, nke nwere akwa nhicha akwa na akwa nko 5, ezigbo maka ojiji na ime ụlọ ihi ụra, ime ụlọ ịwụ, na ime ụlọ. Nke a multifunctional akwa ogbe wuru nke 304 igwe anaghị agba nchara. na-echebe akwa nhicha ahụ maka mmebi na nchara nchara.
Nkọwapụta numberdị nọmba CP-F42 Isi Ihe 304 igwe anaghị agba nchara Emecha nchapu Mbukota akpa ụfụfụ na katoonu Ngwa athlọ ịwụnye Wall Wụnye mgbidi akwa a na-agbanwe agbanwe nke 304 igwe anaghị agba nchara. Ọdịdị mara mma nke mara mma, imepụta ihe nkedo zoro ezo, na-echebe akwa nhicha ahụ maka mmebi na nchara. Ihe a na-egosipụta atụmatụ ezi uche dị na ya, na-eme ka mgbanwe dị jụụ ma nwee obi ike na ihe dị adị. Pụrụ iche ...
Nkọwapụta numberdị nọmba CP-FB02 Isi Ihe 304 igwe anaghị agba nchara Ichachacha ngwugwu Akpa ụfụfụ na ngwa ngwa onlọ ịsa ahụ na kichin Ebe a na-ekpochapu ala bụ nke igwe anaghị agba nchara, na-eme ka ọ dị ike na ịdị ogologo ndụ, na-adịgide adịgide ma na-adịghị emebi emebi. orùrù ọrụ, ọ na-emesi adịchaghị mma na ogologo arụmọrụ ndụ. Nchọpụta ihe na-egbochi ihe mkpofu n'ime ọkpọkọ ma gbochie ọkpọkọ ahụ, na-enye nchebe zuru oke ...
ala igbapu nke 304 igwe anaghị agba nchara
Nkọwapụta numberdị nọmba CP-FB01 Isi ihe 304 igwe anaghị agba nchara Emechara nchacha ngwugwu ụfụfụ akpa na katọn Nke a na-eme ka ala dị larịị nke igwe anaghị agba nchara, na-eme ka ọ dị ike na ịdị ogologo ndụ, na-adịgide adịgide ma na-anaghị emebi emebi. na-ekwe nkwa adịchaghị mma na ndụ ogologo ndụ. Nchọpụta ihe na-egbochi ihe mkpofu n'ime ọkpọkọ ma gbochie ọkpọkọ ahụ, na-enye nchebe zuru oke na gburugburu ebe obibi dị ọhụrụ. Ukwu str ...